VaDabengwa Vanoti Mauto Ngaasiye Nyaya dzeMatongerwo eNyika
Chivabvu 18, 2012
Vaimbova gurukota rezvinoitika mukati menyika uye vari mutungamiri we Zapu yakamutsiridzwa, VaDumiso Dabengwa, vashora vari zvikuru vemuchiuto vari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
VaDabengwa vakurudzirawo kuti simba rehurumende riendeswe kumatunhu, kana kuti devolution of power.
Vachitaura nevatori venhau muHarare neChishanu, Va Dabengwa vati Zanu PF haisi kuda kuendesa masimba kumatunhu vachiti bato iri riri kutya kutorerwa masimba nevanhu kana rikabvuma kuita izvi sezviri kudiwa neveruzhinji.
Va Dabengwa vati kuendesa masimba ehutongo kumatunhu kunobatsira vanhu vanenge vari mumatunhu aya kuti vakasike kubatsirwa pane zvavanenge vachida kubva kuhurumende. Vati pari zvino zviri kuomera veruzhinji vanogara kunze kweHarare kuti pose pavanenge vachida zvinhu zvine chekuita nehupenyu hwavo kubva kuhurumende, vanotofanira kutanga vaenda kuHarare kuti vazviwane.
Pakubvunzwa kwakaitwa vanhu pfungwa dzavo nekomiti iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika yeCopac kuti zvive mubumbiro iri, VaDabengwa vati bato ravo rakataura zvakasimba nenyaya yekupa matunhu masimba ekuzvitonga, asi pfungwa dzavo hadzisi kuteererwa nemapato ari kutungamira chirongwa ichi, kunyanyanyanya Zanu PF.
Sebato, VaDabengwa vati vanoda kuti munyika muve nematunhu mashanu anoti Mashonaland, Masvingo, Manicaland, Midlands pamwe neMatabeleland.
VaDabengwa, avo vaimbova muchiuto munguva yehondo yerusunguko vari kudivi reZipra, vashorawo vari muchiuto vari kupindira munyaya dzevematongerwo enyika vachiti izvi hazvibvumirwe mumutemo wechiuto. VaDabengwa vati vanhu vakadai vanofanira kusiya basa sezvo vachiti vanhu ava vari kutyora bumbiro remitemo yenyika.
Vaenderera mberi vachiti mapato anopikisa Zanu PF haafaniri kubatana panguva yesarudzo kuti atsigire munhu mumwe chete achakwikwidzana nemutungamitri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, VaRobert Mugabe.
Vaimbova gurukota rezvemari uye vari mutungamiri we Mavambo Kusile Dawn, Va Simba Makoni, vakabuda mubepanhau re Financial Gazette vachiti mapato anopikisa Zanu PF anofanira kushanda pamwe chete kuti atsigire munhu mumwe chete achakwikwidzana naVaMugabe.
Va Dabengwa varambawo mashoko anogarotaurwa neZanu PF ekuti bato ravo ibato revanhu vanoita zvekusarura marudzi.
VaDabengwa vati bato ravo ratekeshera nenyika yose, uye rave nemakomiti mumatunhu ese enyika.
VaDabengwa vakabuda muZanu PF muna 2008 vachiti vakanga vasiri kufara nemhirizhonga yakaitwa mugadziriro yesarudzo dzegore iri. VaDabengwa, avo vaive gurukota rezvemukati menyika muna 1998, vanoshorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu kuti, ivo segurukota, vakasiya mapurisa aiva pasi pavo, achizhindikita vanhu vairatidzira kusafarira kwavo kukwidzwa kwemitengo yechikafu munyika.
VaDabengwa mumwe wemakurukota aive eZanu PF akakundwa nenhengo dzeMDC musarudzo dzakaitwa muna 2000.